काठमाडौं । उद्योगी आनन्द बतासले देश राजनीतिक चेतनाको विकास र अधिकारको कुरामा अगाडि रहे पनि समाजको विकास, व्यावसायिकता, इमानदारिता, सकारात्मक सोचलगायतमा पछि परेको बताएका छन् ।
पूर्वमन्त्री दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीको ५२औँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विकासको सन्दर्भमा ‘आउट अफ द बक्स’मा गएर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । “विगत ५० वर्षमा विकासका लागि राजनीतिक वर्गले जे भाषणा गरे, अब त्योभन्दा फरक भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने ।
सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका हेर्दा हाम्रो बहुसंख्यक समाज राम्रो कामको स्वागतभन्दा सस्तो लोकप्रियताको समर्थनमा देखिएको उनले बताए । “समाजको बौद्धिक विकास, सकारात्मक सोचको विकासमा हामी हराउँदै गएका हौँ कि भन्ने महसुस भइरहेको छ,” उनले भने ।
देशको विकासको लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, जडीबुटी वा अन्य विषयमा कुरा गर्न कुनै राजनीतिज्ञले नछुटाएको तर विकासका लागि उचित वातावरण अझै बन्न नसकेको उनले बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताले पाएको दुःखको स्मरण गर्दै उनले कुनै योजना लिएर गाउँमा जाँदा त्यहाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने, कसरी दुःख दिन सकिन्छ, कसरी छुट्न सकिन्छ भन्ने ग्रसित मानसिकता देखाइने गरेको सुनाए । “यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै सफलता हासिल गरिरहेका छन्,” उनले भने ।
निजी क्षेत्रको लगानीबाट ७५० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिसकेको र आउँदो दुई वर्षभित्रमा १५ सय मेगावाट राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने उनले बताए । “यो पनि देशको विकासमा निजी लगानीकर्ताले गरेको योगदान हो भन्ने कुरामा पछि पर्न हुँदैन । तर, दुर्भाग्य ! जलविद्युत्मा लगानी गर्नु भनेको सायदै माओवादीको १२ वर्षे द्वन्द्वभन्दा सजिलो छैन,” उनले बताए ।
पर्यटन समृद्धिको आधार बन्न सक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकिरहेको उनले बताए । “पर्यटन समृद्धिको आधार पक्कै बन्न सक्छ । तर, दुर्भाग्य ! कस्तुरी बिना कस्तुरी दौडिरहेको जस्तो भइरहेको छ,” उनले भने ।
उनले भारत र चीन दुई ठूला देशबाट मात्रै वार्षिक एक करोड बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताए । “यी दुई देशका जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत पर्यटक मात्रै ल्याउन सक्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा बन्ने होेटेल मात्रै होइन, हरेक नागरिकको घरमा पनि राखेर सक्दैनौँ,” उनले भने, “अहिले ११/१२ लाख पर्यटकमै मख्ख परेर बसिरहेका छौँ ।”
उनले पर्यटनलाई भौतिक पूर्वाधारसँग मात्रै जोडेर कुरा गर्ने गरिएको भन्दै आफ्नो असहमति जनाए । “पर्यटनमा भौतिक पूर्वाधार नचाहिने भन्ने होइन । तर, हाम्रो संस्कृति, परम्परा, हिमशृंखलालाई नै बेच्नुपर्छ,” उनले भने । उनले गुणस्तरीय पर्यटकभन्दा पर्यटकको संख्या बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताए । पर्यटकको संख्या नभई उसले गर्ने खर्चलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “२० लाख पर्यटक होइन, पाँच लाख नै आओस् । तर, धेरै खर्च गर्ने, गुणस्तरको पर्यटक रोजौँ । छिमेकी देश भुटानबाटै त्यो सिक्न सक्छौँ,” उनले भने ।
धनी बन्ने सोचले नै मान्छेलाई समृद्धिमा पुर्‍याउने भन्दै उनले दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीको भनाइ स्मरण गर्दै भने, “देशले सही नेतृत्व पाउने हो भने हजारौँ उद्योगी–व्यवसायीले लाखौँलाई रोजगारी दिनेछन् ।”
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नीति निर्माणको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । दायित्व नेपाल सार्वजनिक... ३३ मिनेट पहिले
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ पच्छ्याउँदै स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य सामान्य कमी आएको छ ।आइतबारको तुलनामा छापावाल सुनको भाउ तोलामा... ५६ मिनेट पहिले